Nin Soomaali ah oo lagu toogtay Suuriya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Nin Soomaali ah oo lagu toogtay Suuriya
Nin Soomaali ah oo lagu toogtay Suuriya
Ururka la socodka Xuquuqda Aadanaha ee dalka Suuriya ee fadhigiisu yahay Magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay in nin Soomaali ah oo ka mid ahaa Kooxda Daacish in lagu dilay Gudaha dilkaasi.
Ninka Soomaaliga ah iyo xubno kale oo la socday ayaa la sheegay in Kooxaha hubeysan ay jidka u galeen xilli ay ku safraayeen Gudaha gobolka Idlib ee dalka Suuriya.
Kooxda waxa ay sheegtay in ninkaasi Soomaaliga oo muddo dheer qeyb ka ahaa dagaalka ka socda Kooxda Daacish ay ka waddo Suuriya.
Ninka Soomaaliga ahaa Gudaha dalka Suuriya looga yaqaanay sidda ay sheegtay Kooxdaasi Abuu hureyra Al Soomaali , waxaana la sheegay markii hore ee ka yimid dhanka Qurbaha.
Cabdiraxman Shariif iyo Khaliif Shariif oo da’dooda lagu sheegay 21 jir iyo 18 jir ayaa la xaqiijyey in 2016-kii ay ku geeriyoodeen dagaal ka dhacay dalka suuriya, xilli ay ka garab dagaalamaayeen kooxda la magac baxday dowladda islaamka ee daacish.
Soomaali u badan dhalinyaro oo heystay dhalashada dalalka Britain iyo maraykanka ayaa ku biiray Kooxda dowladda islaamiga ah ee Daacish iyadoo magaalada Manchester iyo gobalka menisoto ee dalka maraykanka lagu tilmaamay meelaha ugu oo ay baxeen dhalinyarada ku biirtay IS oo isugu jiray wiilal iyo gabdho.
Previous articleMeydad weli yaalla goobihii shalay Qaraxyadu ka dhaceen
Next articleFaa faahin:Nin walaalkiis ku dilay Muqdisho